Ciidmadda Somaliland Iyo Kuwa Ethopia Oo Buurta Duleedka Xariirad Ee Deegaanka Awdal Dagaal Ku Dhexmarayo Koox Hubaysan Oo Gashay Halkaa | Araweelo News Network (Archive) -
Ciidmadda Somaliland Iyo Kuwa Ethopia Oo Buurta Duleedka Xariirad Ee Deegaanka Awdal Dagaal Ku Dhexmarayo Koox Hubaysan Oo Gashay Halkaa
Hargeysa(ANN) Ciidamada Somaliland iyo kuwa Ethopia oo ku hareeraysnaa koox hub iyo saanad milateri sidatay oo gashay Buuraleyda deegaanka galbeed ee Awdal ayaa isku haleelay saaka Buurta lagu magcaabo Dur-dur ee deegaanka duleedka Xariirad oo ah deegaan beeralay ah, halkaas oo dagaal xoogani ku dhexmarayo.
Dad ku sugan magaalada xariirad ayaa shebekada wararka ee Araweelonews khadka isgaadhsiinta ugu sheegay in saaka halkaa dagaal ku dhexmarayo Ciidanka Somaliland iyo Ciidanka Ethopia oo is kaashanaya iyo kooxdaa oo doonaysay inay baxsadaan.
Wararku waxay sheegayaan inay kooxda hubaysan eek u jiray Buurta Maar Maar ay isku dayeen inay xalay ka baxaan iyagoo isu qaybiyay laba qaybood, balse ay saaka ciidamada isku haleeleen duleedka xariirad buuraleyda dur dur oo u muuqata xariirad, iydoo ciidanka Somaliland gudaha u galeen laba KM xadka Ethopia. Kadib markii kooxda hubaysani ka baxaday Buurtii hore ee ay ku jireen, iyadoo ciidanka Ethopiana kooxdii kale dagaal ku dhexemarayo meel aan sidaa uga fogayn halkaa. Dadka deegaanka ayaa shebekada wararka ee Araweelonews inay maqlayaan rasaasta halkaa ka socota, iyadoo qaarkood sheegeen in dhaawacyo qaar ka mid ah dadka deegaanka u dhashay oo gadhwadeen u ahaa kooxdaa la keeno deegaanka xariirad.
“Rasaasta waanu maqlaynaa Nimankana awalba meesha way mari jireen oo waa jabhada OLNF, waxaana lacago ka qaata dadka masuulka ah ee maamulka, dawladii horena way ogayd ee hada waxan qabaa in maamulka cusub fashiliyay, waayo dadka maamulka oo dhamina waa dawladii hore, markaa waxba iskama bedelin halkan.” Sidaa waxa yidhi odayaasha deegaanka xariirad oo cod saday in aan magaciisa la xusin.
Wixii warar ah ee soo kordha kala soco shebekada wararka ee araweelonews.com